Shiinaha Anti-coronavirus (COVID-19) Warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha wajiga ee qalliinka loogu talagalay ee caafimaadka iyo kuwa la tuuro ah | ASN
Anti-coronavirus (COVID-19) Maaskarada wajiga ee wajiga qalliinka loogu talagalay ee Medical & Disposable 3ply
* Faa'iidooyinka Maaskarada Wejiga La Tuuri Karo: 3 lakab oo sifeyn ah, ur lahayn, waxyaabaha ka hortagga xasaasiyadda, baakadaha nadaafadda, neefsashada wanaagsan.
dadka, shaqaalaha adeegga (caafimaadka, ilkaha, kalkaalinta, cuntada, rugta caafimaadka, qurxinta, ciddiyaha, xayawaanka guriga, iwm), iyo weliba bukaannada u baahan
* Laablaab saddex-lakab: Meel neefsasho 3D ah
* Qalabka sanka ee qarsoon: wuxuu raaci karaa hagaajinta dusha wajiga, ku habboon wajiga
* Laab-furnaan sare, wareegsan ama fidsan dhego-furan cadaadis hoose, dhegaha oo ka raaxo badan
Maaskarku wuxuu daboolaa sanka iyo afka isticmaalaha wuxuuna siiyaa caqabad jireed xagga dareeraha iyo walxaha walxaha yar yar.
Waxyaabaha 3ply 25g / m2 maro pp oo aan tolmo wanaagsan lahayn
Caabbinta dareeraha 120mmHg
Dareemida Fasalka I
Qaabka Elastic Earloop
Faahfaahinta xirxirashada 10pcs / pkg, 5pkgs / box., 48 bxs./CTN
Cabirka Box 18.5 × 10 × 9cm
Cabirka kartoonka 38.5 × 41.5 × 56cm
- Sidee loo sameeyaa baaritaan?
Fadlan noo sheeg maaddada, xajmiga, tirada alaabta aad u baahan tahay, iyo sidoo kale habka gudbinta ee aad doorbideyso. Waxaan soo dhaweyneynaa iibsadayaasha markii ugu horeysay. Si fudud noo soo dir sawirada maqaallada aad nooga baahan tahay inaan ku siino ama noo sheeg shuruudahaaga. Waxaan ku siin karnaa badeecado la mid ah ama xitaa tayo sare leh.
- Sidee loo codsadaa badeecad tijaabo ah?
Kadib markaad xaqiijiso badeecada aad rabto, waxaad codsan kartaa shay-baarka. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad hubiso tayada.
Haddii aad rabto shaybaar caadi ah (oo aan calaamadeysneyn, aan calaamadeysneyn), waxaan kuu soo diri doonnaa adiga oo aan wax kharash ah kugu fadhiyin, kuu keydso rarka. Ka dib marka la xaqiijiyo amarkaaga, qiimaha xamuulka ee muunada laga jarayo ayaa lagaa jarayaa qiimahaaga guud
Haddii aad u baahan tahay inaad beddesho cabbirka badeecada ama wixii kale ee qeexitaanno ah, noo soo dir faahfaahinta isbeddeladaas (sida ugu habboon sawirrada). Waxaan dib ugala xaajoon karnaa kharashka.
- Ma ii sameyn kartaa naqshadeynta aniga?
Taasi waa ujeedkeenna! Waxaan jeclaan lahayn inaanu qaabeyno si waafaqsan fikradahaaga iyo macluumaadkaaga. Isbedelo yaryar ayaa lagu sameyn karaa bilaash. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada naqshadaha waaweyn waxay keeneysaa lacag dheeraad ah.
Hore: Galoofyada nitrile
Xiga: Faashadda laastikada oo sarreysa
Anti-coronavirus (COVID-19) FFP2 KN9 la tuuro ...